प्रदेश २ Archives - Page7of9- Dna Nepal
प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तोक्ने तयारी २७ मंसिर २०७४, बुधबार १७:०७
काठमाण्डौं, मंसिर २७ । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने कार्यालयबारे अध्ययन भैरहेको छ । यद्यपी यसबारे शहरी विकास मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन । पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश नं १ को धनकुटा, धरान, इटहरी वा विराटनगर,..
को बन्दैछन् प्रदेश प्रमुख ? यि हुन् चर्चित अनुहार २६ मंसिर २०७४, मंगलवार १६:२९
काठमाण्डौं, मंसिर २६ । नयाँ संविधान अनुसार तीन संरचनाको सरकारमध्ये प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता..
सर्लाहीको हाल सम्मको मत परिणाम २५ मंसिर २०७४, सोमबार ०९:४६
सर्लाही, मंसिर २५ । सर्लाही क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रमोद साह विजयी भएका छन्। साह २२ हजार ३६ मत ल्याएर विजयी बनेका छन्। साहले वामगठबन्धनका ध्रुबप्रसाद गौतमलाई ५ सय ७१ मतले पछि पार्दै विजयी बनेका हुन्।..
राहदानी दुरुपयोग गरेका माओवादी उम्मेदवार रायको उम्मेदवारी खारेज ११ मंसिर २०७४, सोमबार ०३:३०
काठमाडौं, मंसिर ११ । सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–४ का माओवादी केन्द्रका उमेदवार शिवपूजन राय यादवको उम्मेदवारी रद्द भएको छ । उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको हो । सोही क्षेत्रका स्वतन्त्र उमेदवार गणेशकुमार..
५७ स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत (सूचीसहित) २६ आश्विन २०७४, बिहीबार ०२:०४
काठमाडौं, असोज २६ । पिछडिएको क्षेत्र भन्नासाथ हामी कर्णालीका ५ सहित ९ जिल्ला सम्झन्छौं । तर, अब यसको परिभाषा विस्तारित भएको छ । सरकारले हालै मात्र प्रदेशगत रुपमा पिछडिएको क्षेत्र तोकेको छ, जसमा ५७ स्थानीय तह परेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य..
यि हुन ७ प्रदेशका ७ राजधानी (सूचीसहित) २४ आश्विन २०७४, मंगलवार ०२:४६
पोखरा, असोज २४ । देशभरीमै पोखरा एकमात्र निर्विवादित राजधानी बनेको छ । ४ नम्बर प्रदेशका लागि हरेक हिसावले पोखरा राजधानीका लागि उपयुक्त छ । राजनीतिक दलदेखि सामान्य मान्छेपनि पोखरालाई राजधानी मान्न तयार छन् । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन..
यस्तो छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणाम १० आश्विन २०७४, मंगलवार ०१:०४
वीरगञ्ज, असोज १० । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार संघीय समाजवादी फोरमले कांग्रेससँगको मतान्तर ९ सय ८४ बनाएको छ । ६१ हजार ६ सय ४३ मत गणना हुँदा यस्तो देखियो पछिल्लोे मतपरिणाम यस्तो छ- नेपाली कांग्रेसका प्रमुख उम्मेदवार अजय..
मतपरिणाम अपडेट-१२९ तहमा कसले कहाँ जिते ? ९ आश्विन २०७४, सोमबार ०१:५८
एजेन्सी, असोज ९ । असोज २ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको जारी मतपरिणाम अनुसार अहिलेसम्म १२७ तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । एक सय ३६ तहमध्ये अब १२ स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी छ । बाँकी तहमा मतगणना जारी छ । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस ३७..
चुनाव अपडेट-११२ तहमा कसले कहाँ जिते ७ आश्विन २०७४, शनिबार १५:०७
पोखरा, असोज ७ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश २ को मतगणनामा नेपाली कांग्रेस पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। ११२ स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुँदा कांग्रेस ३३ स्थानमा विजयी हुँदै अग्रस्थानमा छ । नेपाली कांग्रेस..
मतगणना अपडेट–९३ तहको नतिजा (सूचीसहित)
पोखरा, असोज ७ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश २ को मतगणनामा नेपाली कांग्रेस पहिलो नम्बरमा देखिएको छ । ९३ स्थानीय तहको अन्तिमा नतिजा सार्वजनिक हुँदा कांग्रेस ३२ स्थानमा विजयी भएको हो । नेपाली कांग्रेस रौतहटको परोहा..